XOG: Go'aankii Midowga Musharixiinta oo Halis soo wajahday iyo laba Musharax oo laga shakiyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: Go'aankii Midowga Musharixiinta oo Halis soo wajahday iyo laba Musharax oo laga shakiyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Go’aankii Midowga Musharixiinta oo Halis soo wajahday iyo laba Musharax oo laga shakiyay
Dib u dhac siyaasadeed iyo xaalad cusub ayaa soo wajahay go’aankii Midowga Musharixiinta ee hakinta Doorashada Golaha shacabka markii ay laba dhinac oo hore u taageresanaa ka hor yimaadeen, lana dardar geliyay doorashadii.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa ka noqday dalabkii uu dalbaday in la joojiyo Doorashada xildhibaannada kasoo jeeda Gobollada Waqooyi ee Somaliland, markii heshiis laga gaaray arrimihii la isku hayey, iyadoo dib loo bilaabanayo doorashada xildhibaannaada Somaliland.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo isbaheysi siyaasadeed la ahaa Musharixiinta ayaa go’aansaday inuu bilaabo Doorashada Golaha Shacabka, waxaana xalay Guddiga Doorashada Jubbaland uu ku dhawaaqay qabashada 14 kursi oo ka mida kuraasta taalla Jubbaland.
Labadan tallaabo ee loo qaaday socodsiinta Doorashada waxay jug weyn ku tahay Midowga Mushriixinta oo dadaal ugu jiray joojinta Doorashada inta shirweyne la isugu imaanayo; waxayna hadda u muuqdaan inay meel cidlo ah ku soo dhaceen oo aysan jirin cid ay taageero ka heystaan oo saameyn ku leh doorashada.
Waxay inta Mushrixiinta ololaha ugu jiray hakinta doorashada ay hore shaki uga qabeen labada musharax ee ka mida Golaha oo ka ah madaxweynihii hore Shariif Sheeklh Axmed iyo Ra’iisal wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo taageersan in doorashada Golaha shacabka lasii wado, wixii la sixi karana la saxo intii la hakin lahaa ma ala joojin lahaa, iyagoo ku doodaya inuusan jirin xal aan doorasho ahayn.
Kulanka Hogaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran la yeeshay Ra’iisal wasaare Rooble iyo kulan kale oo Khadka Internet-ka ku dhex maray Sheekh Shariif, Xasan Kheyre iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa xaaladda uga sii daray, taasoo caddeyn u ah in Midowga Musharixiinta ay ku kala qeybsan yihiin Doorashada Golaha Shacabka ee socota.
Previous articleShanta Kursi ee Banaadiriga oo la shaaciyey in lagu dooranayo Muqdisho
Next articleDowladda Masar oo Safiir cusub u soo magacawday Soomaaliya